Libhalwa njani ibali elifutshane | Uncwadi lwangoku
Libhalwa njani ibali elifutshane
Encarni Arcoya | | Amabali
Abantu abaninzi bacinga ukuba ukubhala ibali kulula kakhulu kunokubhala inoveli. kodwa ngokuqinisekileyo akunjalo. Kunzima ngakumbi. Kwaye kukuba kufuneka udibanise lonke ibali kumaphepha ambalwa kwaye akukho lula. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba libhalwa njani ibali elifutshane?
Ukuba ulubonile ukhuphiswano lokungenela, okanye uye wafumana ithuba lokubhala ibali elifutshane, ngoko sikunika izitshixo ukuze ukwazi ukwenza oko. Qwalasela.
1.1 Iimpawu zamabali amafutshane
2 Indlela yokubhala ibali elifutshane: amacebiso angcono
2.1 Yazi into oza kuyithetha
2.2 Ufuna ntoni ngebali?
2.3 Ngubani oza kubalisa ibali?
2.4 yintoni ihuka
2.5 Qaphela ukuba ungasebenzisi izichazi ezininzi.
2.6 Musa ukucinga
2.7 Yiyeke iphumle kwaye uyifunde
Ibali elifutshane lingachazwa njenge ibali elifutshane kunenoveli. Kodwa njengoko uya kuqonda, ihlala ingacacanga.
Ngokwenyani, ukuba singena nzulu ngakumbi kwiimpawu zebali elifutshane, sinokuthi ubude bezi ngokuqhelekileyo abukho ngaphezu kwamagama angama-2000. Zinde kunebali kodwa, kwangaxeshanye, azijongwa njengebali okanye inoveli.
Amabali amafutshane afana namabali, kodwa njengoko igama libonisa, mafutshane. Enyanisweni, banokubalisa into enye nebali, kodwa bakwenza oko ngamagama ambalwa kakhulu. Abanye bade bathethe ngezishwankathelo zamabali, kuba kula mazwi amaninzi awunandawo ingako yokwandisa.
Kodwa makhe sibone ukuba zeziphi iimpawu:
Eyona ndima ibalulekileyo yile yombalisi. Ngenxa yokuba akuninzi ekufuneka uqhube ngako, umbalisi ngumntu okwaziyo ukushwankathela okanye akunike umbono wento ethethwayo, ngaphandle kokungena nzulu ngabalinganiswa athetha ngabo.
Ngokungafaniyo neenoveli okanye amabali, Ibali elifutshane akunyanzelekanga ukuba libe nentshayelelo, umthetho ophakathi kunye nesiphelo. Apha sinokubhala ngeqhina, isiphumo okanye malunga nenyani eyodwa yabalinganiswa.
Igxininisa kwisihloko esithile. Kuba injongo yayo kukuxelela loo nyaniso, akukho nto ingaphezulu, ngaphandle kokunika umxholo okanye imbali.
Uneentlobo ezahlukeneyo zamabali amafutshane, njengabanyanisekileyo, abachaza iimeko zemihla ngemihla kwaye basenze sivelane nayo (kuba siphile okanye sikholelwa ukuba kunokwenzeka). Kwaye abo bangenangqiqo, abanokuba bangaqhelekanga, kunye neemeko ezingenakwenzeka; kumnandi okanye kuyamangalisa (iintsomi kunye namabali).
Indlela yokubhala ibali elifutshane: amacebiso angcono
Ngaphambi kokuba uqalise ukubhala ibali elifutshane, kufuneka ulandele ezi ngcebiso zokukunceda ufezekise umphumo owaneleyo, oziva unebhongo ngayo kwaye, ngaphezu kwakho konke, abafundi bakho abathanda.
Ngaloo ndlela, amanyathelo okufuneka uwathathe ngaphambi kokuba uhlele emsebenzini ngala:
Yazi into oza kuyithetha
Kusenokwenzeka ukuba siye savela necebo ngebali kwaye sele sisazi yonke into eza kwenzeka. Kodwa kufuneka ukhumbule ukuba libali elifutshane, hayi ibali okanye inoveli.
Ngamanye amagama, kufuneka ulenze libe lula ibali, lawula ukugxila kuphela kwiinkcukacha ezibalulekileyo ukwenzela ukuba umfundi alandele isicatshulwa kwaye asiqonde, kwaye ngexesha elifanayo ungachithi amagama amaninzi ukufezekisa.
Ufuna ntoni ngebali?
Ngaba wakha wazibuza, xa sele uqalile ukubhala inoveli, ibali, okanye, njengale meko, ibali elifutshane, ufuna azive ethini umfundi?
Ufuna ndihleke? Makalile? Mhlawumbi umfundise okuthile? Ibali elifutshane kufuneka libe nenjongo kwaye le yimpembelelo oya kuyixhokonxa kumfundi. Kusenokwenzeka ukuba ufuna ukuba achithe ixesha elithile ehleka, ukumenza umdla...
Konke oku kuya kutshintsha indlela omele ubhale ngayo.
Ngubani oza kubalisa ibali?
Ngaphambi kokuba sikuxelele oko kumabali amafutshane umbalisi ngumlinganiswa ophambili nodla ngokubalisa ibali. Kodwa ngokwenene akufuneki ukuba kube njalo. Kusenokwenzeka ukuba omnye wabalinganiswa nguye oxelayo.
Ukuba unikela ingqalelo, sikuxelele enye ingongoma: ngaba uza kubhala ngomntu wokuqala okanye kumntu wesithathu? Ukuba ubhala kuqala, kufuneka ukhethe i-protagonist eya kuxela inguqu yakhe yeziganeko. Kodwa kumntu wesithathu kukunika umbono omkhulu.
Kwibali elifutshane, ngenxa yokuba ubude balo buyi-ephemeral, kufuneka uhuke phantse ukusuka kwisivakalisi sokuqala. Kwaye akukho lula oko.
Ngenxa yesi sizathu, kuyimfuneko ukuba ube nekhonkco, into eyenza umfundi angakwazi ukuziqhawula ebalini de aligqibe. Kwaye oku, kufuneka uyibeke ekuqaleni.
Qaphela ukuba ungasebenzisi izichazi ezininzi.
Xa ubeka izichazi ezininzi kubonakala ngathi awunayo enye indlela yokubalisa. Ngamanye amazwi, uya kuba wenza isimbo sebali lakho sibi. iyakuhlala ingcono Nika ukubaluleka kwesizathu sokuba umlinganiswa enze into ethile kunento yokuba utsho ukuba injani laa ndawo.
Kule meko sinokuyisebenzisa kwiinkcazo. Kwibali elifutshane akukho ndawo yabo, kwaye ayibalulekanga. Gxininisa kuphela kwiinyani, kungekhona kwindlela yonke into ehlelwe ngayo (ngaphandle kokuba yinto ehambelana nenjongo ephambili).
Nokuba ngenani lamagama, okanye ngokufikelela kwisiphumo esihle. Amabali amafutshane okuqala owabhalayo asenokungabi mahle, kodwa ngokuziqhelanisa uya kucokisa isitayile sakho kwaye ufike apho ufuna ukuya khona: ukubhala amabali amafutshane amnandi.
Eyona nto ibalulekileyo kukuba nomonde kuba ukuba yincutshe kwinto ethile kuthetha ukuba kufuneka uzinikele ngamandla kunye nomsebenzi.
Yiyeke iphumle kwaye uyifunde
Emva kokuyigqiba, isincomo sethu kukuba yiyeke iphumle, ubuncinci iveki, ukuze ukwazi ukuyifunda kwakhona kwaye ubone ukuba ayinaziphoso na, izinto ezingangqinelaniyo okanye ukuba kukho into engaphumeleliyo kwiploti. Xa uyigqibile, yiyeke kumfundi ongu-zero ukuze avavanye ukuba ilungile na, ukuba kukho into eyenza amathandabuzo, njl.
Uvavanyo lomfundi lunokuba luncedo ukwazi ukuba uyahlangabezana nenjongo ozibekele yona nomfundi.
Ngaba ngoku icacile kuwe indlela yokubhala ibali elifutshane?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Amabali » Libhalwa njani ibali elifutshane
UJose Luis Gil Soto. Udliwano-ndlebe nombhali weBlue Sap Wood